Parenting - Fizarana 2
10 fomba hananganana ankizy tsara
fiofanana, reny / From Poster
Manonofy isika fa hitombo ny ankizy mahomby, mahaleotena ary mamorona. Izy rehetra mba hahafahan'izy ireo hiaina fiainana feno, azo antoka ary mahaliana. Adinontsika anefa ve ny toetra iray manan-danja, nefa tsy sarotra ny ho sambatra? Izany no hatsaram-panahy. Tsy mahatonga antsika ...
9 fomba hanimba ny fahasalamana sy ny fahasambaran'ny zanakao
fiofanana, fahasalamana, Baby Health, reny / From Poster
Vonona ny hanao ny zavatra rehetra ny ray aman-dreny mba hananana zanaka mahomby sy mahomby: fampandrosoana aloha, fanatanjahan-tena avy amin'ny fiaraha-mientana, fananarana, ny fomba farany fanabeazana sy fampiofanana. Tsy maintsy manaiky koa isika fa tsy azo atao ny mifehy ny tontolo ivelany, izay mety hanimba zaza iray.
Nanangona lisitr'ireo zavatra 50 i Neny naniry hampianatra ny zanany vavy amin'ny 18 taona
Ny reny tsirairay dia maniry ny handalo ny traikefany amin'ny zanany vavy, afa-tsy amin'ny fahadisoan'ny besinimaro, manome fahendrena alohan'ny hiverenany amin'ny tovovavy iray. Ny renim-pianakaviana dia nanao lisitry ny zavatra 50 izay tiany hampianarana ny zanany vavy alohan'ny 18 taona. Tahaka izany ity.
3 dingana tsotra mba hampiroborobo ny fanentanana anatiny amin'ny ankizy
Tahaka ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny ankizy hanao izay rehetra angatahiny aminy. Saingy ny fahadisoana lehibe indrindra. Raha tiantsika hanao zavatra ny ankizy, hanampy antsika, na hanohy ny fianarany amin'ny teny Anglisy, amin'ny farany, dia tsy ampy ny faniriantsika. Tena zava-dehibe izany
Ny zon'ny zanaka ho azy
fiofanana, interesnenkoe, reny / From Poster
Impiry isika, ray aman-dreny, dia mahatsapa fa mila manitsy mafy, ampianarina, ary ampianarina amin'ny làlana marina ny ankizy. Manao izany isika amin'ny antony tsara indrindra. Ny tsirairay dia te-hamolavola dikan-teny tsara kokoa: zaza iray manan-tsaina, azo antoka ary tsara fanahy. Saingy amin'ny faniriany, olon-dehibe
Nahoana no tsy mampanahy raha toa ka miparitaka fotsiny ilay zaza?
Matetika ny psikologin'ny ankizy dia mampiasa sary ho an'ny ankizy ho an'ny aretina. Ny ray aman-dreny ihany koa dia mijery ny famoronana ny zanany lahy na ny zanany vavy, miezaka mitady valiny amin'ny fanontaniana mahaliana: "Moa ve ny ankizy mitombo ara-dalàna? Inona no mampanahy azy? ". Misy ny tetika tsotra
Benjamin Spock, dokoteran-jaza: "Indraindray ny ankizy dia afaka mihiaka mafy mafy ka mitomany. Manaisotra ny fitefana ary avelao ny efitrano »
"Inona izany - anontanianao, - moramora hanala ny mandoava, ary handao ny efitrano," Amin'izao fotoana izao, ireo fitsipiky ny fampianarana fanavaozana Benjamin Spock, maro ny aretin-jaza tsy mino ihany no mampametra-panontaniana, fa koa amin'ny ampahany mampidi-doza, na dia ny sasany 50-60 taona lasa izay miorina amin'ny boky "Ny Ankizy ary mikarakara azy »
← Teo aloha 1 2 3 ... 5 manaraka →